ကျောင်းတွေပိတ်ထားချိန်မှာ သားသမီးလေးတွေကို အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ အလှမ်းဝေးသွားမှာ စိုးရိမ်နေရပြီလား ? | MyanLearn Article
ကျောင်းတွေပိတ်ထားချိန်မှာ သားသမီးလေးတွေကို အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ အလှမ်းဝေးသွားမှာ စိုးရိမ်နေရပြီလား ?
ပညာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ကိုယ့်သားသမီးကို အမြဲလိုလို ထိပ်ဆုံးရောက်စေချင်တာ မိဘတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒပါပဲ။
MyanLearn ရဲ့ SPEAK ENGLISH Online Course အကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ အခုလင့်ခ်မှာ ( http://bit.ly/2VT41Nk )
မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပေးပါန ော်။
• Android: https://bit.ly/MLw_20210922
• iOS: https://bit.ly/MLFBi_20210922
ပြဿနာက ခုလို ကပ်ရောဂါဘေးကြီး စတင်ဝင်ရောက်လာချိန်တည်းက ကျောင်းတွေပိတ်၊ သင်ကြားမှုတွေ ရပ်ဆိုင်းနဲ့ဆို တော့ ဒီလို ကာလအတောအတွင်း အိမ်မှာပဲ အနေများပြီး စာလေ့လာဖို့ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းနေကြပြီလေ။
အထူးသဖြင့် အရင်က ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ လေ့လာခိုင်းနေကျ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကို အိမ်မှာနေရင်း အဆက်မပြတ်သွားအောင် ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်လာအောင် ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ဒီလို ကာလတွေမှာ ဘယ်ကများ သင်ယူခိုင်းရပါ့မလဲ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော ဘယ်လို နည်းနဲ့ ကြီးကျပ်ပေးရပါ့မလဲ ဆိုတာကို တွေးတောနေရပြန်တာ အပူ တစ်ခု ဖြစ်နေပြီပေါ့။
ဒီအတွက် စိတ်မပူပါနဲ့။ MyanLearn ရဲ့ SPEAK ENGLISH Online Course ရှိနေပါပြီ။
• Online Course ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်းလေးရှိရုံနဲ့ အိမ်မှာနေရင်း ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေ အတွက် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ အလှမ်းမဝေးသွားစေဖို့ လေ့လာနိုင်မယ်။ စကားပြောလေ့ကျင့်နိုင်မယ်။ ဝေါဟာရ အသစ်တွေ သင်ယူနိုင်မယ်။
• Application နဲ့ သင်ယူရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် မိဘရော သားသမီးတွေပါ အသုံးပြု လေ့လာရတာ လွယ်ကူပါတယ်။
• နောက်ပြီး သင်ခန်းစာတွေကို မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ တွဲပြီး လေ့လာနိုင်မှာဆိုတော့ နားလည်လွယ်တဲ့အပြင် မြန်ဆန်လွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
• စာလေ့လာခိုင်းထားတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်သားသမီးတွေ ပျင်းနေမှာလည်း မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အသံဖိုင်တွေ၊ ဂိမ်း ကစားနည်းတွေနဲ့လေ့လာရမယ့် ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး Bot နဲ့ အပြန်အလှန် လေ့ကျင့်နိုင်သေးတာဆိုတော့ အဖော်မရှိလည်း လေ့ကျင့်ရမှာ ပျင်းနေစရာ မလိုတော့ဘူးလေ။
• ဒီလို လေ့လာသင်ယူမှု ဖြေဆိုမှု တွေကို အမှတ်တွေ ပေးထားသေးတာဆိုတော့ ဒီလို ရလဒ် တွေကြည့်ရင်း မိဘ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်သားသမီးရဲ့ အရည်အချင်းတွေ ဘယ်လောက်တိုးတက်လာတယ် ဘာတွေ လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာ အနီးကပ် ကိုယ်တိုင် ကြီးကျပ်နိုင်ပါတယ်။
• ဒါ့အပြင် လေ့လာမှု ပြီးမြောက်သွားတဲ့ အခါမှာလည်း Certificate ပေးအပ်သွားဆိုတော့ ခုပဲ အိမ်ထဲနေရင်း TV ကြည့်၊အွန်လိုင်းသုံးရင်း ကုန်ဆုံးသွားမယ့် ကိုယ့် သားသမီးလေးတွေရဲ့ နာရီ မိနစ်တွေကို MyanLearn ရဲ့ SPEAK ENGLISH Online Course မှာ ဝင်ရောက် လေ့လာခိုင်းကြည့်ပြီး အနာဂတ်အတွက် အကျိုးရှိစွာ အသုံးလိုက်ပါ။